Global Voices teny Malagasy » Elo Maroloko No Nandravahan’ireo Mpanao Fihetsiketsehana Manohana Ny Demaokrasia Ny Tao Afovoan’i Hong Kong · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Septambra 2014 18:22 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Mampiasa elo hiarovan'izy ireo tena amin'ny baomba mandatsa-dranomaso ireo mpanao fihetsiketsehana. Sary nalain'i PH Yang.
Mampiseho mpanao fihetsiketsehana marobe milanja elo amin'ny loko isan-karazany ny sit-in goavana notontosaina teo akaikin'ny foiben'ny governemanta tamin'ny 28 Septambra, izay mifangarika tanteraka amin'ny lokon'ny fanamian'ny polisy misahana ny rotaka, ny sary mahery vaika nalaina nandritra izany fotoana izany.
Nanao sarin'ny afisin'ny “hetsiky ny elo” ao Hong Kong i Carol Chan. Hoy ny soratra “manana hetsika tanamasoandro i Taiwan, hetsika elobe kosa ny ao Hong Kong”.
Nomen'ny fampahalalam-baovao vahiny anarana hoe “revolision'ny elo” ny fihetsiketsehana milamina. Nahitsin'ny vondrona Facebook “Hong Kong Democracy Now [Demaokrasia ao Hong Kong izao dieny izao]” hoe “Umbrella Movement [Hetsiky ny Elo]” ilay lohateny ary nanoratra fanazavana  mikasika izany izy ireo:
Nomen'ny fampahalalam-baovao vahiny lohateny hoe “Revolision'ny Elo” ny hetsika. Tsy revolisiona mihitsy ity. “Hetsiky ny Elo” no lohateny mifanaraka kokoa amin'ity toe-javatra ity.
Ny “fitaovana” tokana eo am-pelatananay, amin'ny ankamaroany, dia ny elo izay hoentinay matetika ao anaty poketrakanay amin'ny toetr'andro mivadibadika hatrany. Tsy mitady afa-tsy toe-draharaha mitombina ny vahoakan'i Hong Kong. Na dia izany aza, tahaka ny tsy ahafahantsika mijery amin'ny alalan'ny lanitra mandrahona, tsy maniry ny ho tratran'ny tsy ampoizina izahay.
Maneho hetsika malefaka saingy vonona hatramin'ny farany ny “Hetsiky ny Elo”: Miatrika tafio-drivotra sy ny oram-baratra, tsy hiala mihitsy izahay !
Mitaky an'i Beijing mba hanaisotra ny rafitra napetrany amin'ny fifidianana ny mpitarika faratampon'i Hong Kong, antsoina hoe lehiben'ny mpanatanteraka ny sit-in antsoina hoe Occupy Central (Bodoy ny Central). Takian'izany rafitra izany amin'ireo kandidà mikasa hifaninana ny hahazoany ny fanohanan'ny maro an'isa avy amin'ny komity mpanendry feno mpomba an'i Beijing (izany hoe ny Antoko Kaomonista manohana ny Shinoa). Nihitatra tao amin'ny distrikan'ny tetibola ao Admiralty hatrany amin'ny distrikan'ny varotra ao Causeway Bay sy Mongkok ny fihetsiketsehana. Nanjary nitohana ny fifamoivozana tao amin'ny nosy Hong Kong nandritra ny tontolon'ny andron'ny 29 Septambra.
Namoaka matoan-dahatsoratra momba ny Occupy Central, izay nanomboka tamin'ny 28 Septambra ny Global Times, feon'i Beijing, ary miampanga ny hetsika ho manimba ny endrik'i Hong Kong. Manimba tokoa ny endriky ny tanàna ve ny elo noho ny polisy mitam-piadiana milanja tafondro goavan'ny baomba mandatsa-dranomaso?
Pikan-tsary tao amin'ny fahitaliavitra ao an-toerana – TVB.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/30/64479/
 nanoratra fanazavana: https://www.facebook.com/HKDemoNow/photos/a.435818353224329.1073741828.435783956561102/436176776521820/?type=1
 matoan-dahatsoratra : http://www.globaltimes.cn/content/884080.shtml?utm_content=bufferf4705&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer